मिर्गौला फेल हुने सम्भावनाबाट कसरी जोगिने ? – Nepali Health
मिर्गौला फेल हुने सम्भावनाबाट कसरी जोगिने ?
२०७४ फागुन २४ गते ७:३५ मा प्रकाशित
– डा. कल्पना श्रेष्ठ, कन्सलटेन्ट नेफ्रोलोजिष्ट
मिर्गौला के हो ? यसले शरीरमा के काम गर्छ ?
शरीरको मुख्य अंगहरुमध्ये एक हो मिर्गौला । मिर्गौलाको मुख्य काम भनेको रगतलाई शुद्धिकरण गर्ने हो । त्यसबाहेक यसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने , शरीरमा पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने , विभिन्न प्रकारको हर्मोनहरुको उत्पादन गरी रगतको व्यवस्थापन गर्ने, शरीरमा क्याल्सियलाई मिलाएर राख्ने आदि कामहरु गर्दछ ।
कान्तिपुर डेन्टलद्धारा पाँचसय चौध स्कुले विद्यार्थीको नि:शुल्क दन्त परीक्षण
प्रजनन स्वास्थ्यबारे महिलालाई अधिकार दिनुपर्ने